Soo dejisan Disk Drill 3.8.965 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaDisk Drill
Bogga rasmiga ah: Disk Drill
Digsi gaardi – software ah inuu ka soo kabsado xog qalad ah tirtiray ama formatted of qaabab kala duwan. Gaardi digsi waa awoodaa inuu ka soo kabsado files ka drives adag, SSD, Android ama macruufka qalabka, kaararka SD, iwm software wuxuu taageeraa iskaanka deg deg ah oo qoto dheer oo files la tirtiro iyada oo la isticmaalayo algorithms iyo hababka kala duwan soo kabashada. Gaardi digsi leeyahay shaqo gaar ah oo badbaadiyay metadata oo dhan files tirtiray ay guul soo celinta haddii loo baahdo. Gaardi digsi sidoo kale ka hortagtaa dhaawac xogta ku saabsan sidayaal jirka iyadoo la abuurayo image disk ee format DMG iyo dib u soo celinta oo ka mid ah files lumay si toos ah uga image disk.
kabashada xogta Comprehensive ka drives adag iyo sidayaal kala duwan dibadda
Taageerada ugu badan ee nidaamka faylka
scan Quick oo qoto dheer
Ka hortagga Kabcada_ xogta shil
Kaabta galay ISO ama DMG
Soo dejisan Disk Drill
Faallo ku saabsan Disk Drill
Disk Drill Xirfadaha la xiriira